देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसरी गर्दैछन् कमाल, सबैतिर सुरु भयो हाईहाई !! भिडियो हेर्नुहोस् (जानकारीका लागि सेयर गराै) – Onlines Time
July 22, 2021 onlinestimeLeaveaComment on देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसरी गर्दैछन् कमाल, सबैतिर सुरु भयो हाईहाई !! भिडियो हेर्नुहोस् (जानकारीका लागि सेयर गराै)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि विप्लवले भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका हुन्। बुधबार दिउँसो बालुवाटार पुगेर उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका हुन्।
देउवासँगको भेटमा ओली सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। विप्लवले ओली सरकारसँग २०७७ फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। देउवासँगको भेटमा उनले सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
देउवासँगको भेटमा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयको विषयमा कुराकानी भएको विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत सहभागी थिए । देउवाले सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गरेको बाँस्तोलाको भनाइ छ ।